Xudduud la'aan A3 + Cabbirka Epson L1800 Photo Ink Tank Inkjet Printer
L1800-ka ayaa ah nidaamka taangiga ugu horeysa ee A3 + 6-midab ee ugu horreeya adduunka daabacan, adiga oo ku siinaya awood aad ku soo saarto xuduud la'aan, tayada sawirka daabacdaa kharash aad u hooseeya. Marka ay timaado wadaagista sare saamaynta muuqaalada baaxad weyn, L1800 waa xalka aad haysatay sugayay.
. Soo saar ilaa 1,500 4R sawir
. Xawaare daabacan illaa 15ppm
. Dhalooyinka khad-dhalidda badan
. 1-sano oo damaanad ah ama 9,000 oo daabac ah
Original CISS printer cusub 6 midab
Aan lahayn khad asal ah gudaha
Xulasho wanaagsan daabacaadda sublimation
Qiimo Jaban, Daabacaadda Volume Sare A3 Cabbirka Epson L1300 Sawir Sawireed Taangado Inkjet ah
Epson L1300 waa dunidii ugu horeysay 4-midab, A3 + daabacaadda nidaamka haanta asalka ah, taasoo keeneysa awood aad u sareysa oo tayo sare leh daabacaadda dukumiintiyada A3 si weyn.
Dhalooyinka khad-dhalidda badan
Xawaare daabacan illaa 15ipm
Daabac daabacaadda illaa 5760 x 1440 dpi
Dammaanad ka kooban 2 sano ama 30,000 bog, midkastoo ugu horreeya
7ML / Dhalo Gacmeed Dahaarka Dahaarka Dahaarka ah ee loogu talagalay Fountain Dhex Qalin Qalinjabin Qorista Rinjiyeynta Graffiti Non Carbon
12 Pcs x Dip Pen Ink (qalinku kuma jiro).
18ml Glitter Powder Color Calligraphy Writing Rinjiyeynta Dhalada Dhalada Qalinka Qalin Dhalada
24 midabbo kala duwan, oo loo isticmaali karo qorista, ranjiyeynta, calaamadeynta, xardhida.
Waa xulasho wanaagsan iskuulka ama xafiiska isticmaalka.
Iyada oo budada dhalaalaysa ay ku jirto khad, samaynta qoraalka ama ranjiyeynta ayaa ka fiican.